ဘေးသွားအကူအညီ နှင်‌့ သွားအ‌သေစိုက်‌ခြင်‌း | D Royal Dental Clinic
ဘေးသွားအကူအညီ နှင်‌့ သွားအ‌သေစိုက်‌ခြင်‌း
သွားအသေစိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျိုးသွားသောသွားနေရာ၏ ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်စီတွင်ရှိသော
သွားနှစ်ချောင်း ကိုအနည်‌းငယ်‌ တိုက်‌စားပုံ‌ဖော်‌ပီးတံတားပုံစံ (Bridge)တွဲ၍ သုံး‌ချောင်‌းတွဲစိုက်ခြင်းကို‌ခေါ်ပါသည်‌။
(1)သွားတစ်ချောင်း မရှိတော့လျှင် ဘေး၂ ချောင်းကို တွဲရလို့ သုံးချောင်းစိုက်ရပါမည်။
(2)သွားနှစ်ချောင်း မရှိတော့လျှင် ဘေး၂ ချောင်းကို တွဲရလို့ လေးချောင်းစိုက်ရပါမည်။
(3) အကယ်၍မနူတ်ပဲ၊အကြောသတ်ထားသည့် သွား သို့မဟုတ် ပိုးစားပီးပဲ့သည့်သွားဆိုလျှင် အောက်ခံသွားရှိပါက တစ်ချောင်းတည်း သာစိုက်ရပါမည်။
ဒီမတ်လ အတွင်းသွားအသေစိုက်ခြင်းအားလုံး ကို 10% ချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။????????????
သွားအ‌သေစိုက်‌ရာတွင်‌ အမျိုးအစား ၄မျိုး ရှိပါသည်‌။
(1) ပလတ်စတစ်သွား (acrylic jacket crown)
-ပေါ့ပါး ပီး ဈေးသက်သာပါသည် ။ အရှေ့သွား
အတွက် သာအသုံးပြု ပီး သွားနှင့်အရောင်တူပါသည်။ အမာဝါးခံနိုင်စွမ်း မရှိပါ ။နှစ်ကြာလျှင် အရောင်‌ပြောင်းလဲမှုရှိပါသည်။ယာယီ အစွပ်အတွက်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
ပုံမှန်‌သတ္တု အမျိုးအစားတွင်‌ မာ‌ကျောခိုင်‌ခံမှု အ‌ကောင်‌းဆုံးဖြစ်‌ပီး အနောက်သွား အတွက် အသုံးပြု ပါသည်‌။
စားသည်‌့ ဝါးသည်‌့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်‌ရှိသည်‌့အတွက်‌‌
‌ကြောင်‌့ ကွမ်‌းစားသူများနှင်‌့ အမာကြိုက်‌သူများ ၊ကုန်‌ကျစရိတ်‌ သက်‌သာချင်‌သူများ အတွက်‌အထူးသင်‌့‌လျော်‌ပါသည်‌။
(3)သတ္တုစပ်ကြွေသွား (Porcelain Fused to Metal)
-ခိုင်ခံမှု ပိုကောင်း ပီး ၊သဘာဝသွားနှင့်အရောင် တူပါသည်။
-အောက်ခံသတ္တု ကို အခြေခံထားပီး အပေါ်တွင် ကြွေသား တင်ထား ခြင်း‌ကြောင့် လှပမှု နဲ့ မာ‌ကြော မှု အတွက်ပါ အသုံး ဝင် လှပါသည်။
-ဈေး နူန်း သင့်တင့်‌သော ကြောင့် လွန်ခဲ့‌သော နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်း က အသုံးပြုလာသလို ၊ ခုလက်ရှိ လည်း အသုံးဝင်ဆဲပါပဲ။
- ရှေ့သွား နှင့် အနောက်သွား အတွက်ပါ စိုက်လို့ ရပါသည်
-တခါတရံ သွား ဖုံး ခြေ တွင် Dark line လို့ခေါ်တဲ့သတ္တု ရာ ထင်ပီး မဲတတ်ပါသည်။(အလှအပ ကြိုက်တဲ့လူငယ်များအတွက်မသင့်တော်ပေ)
-သတ္တု နှင့်ကြွေဆက်ထားသည့်အတွက် အခန့်မသင့် ရင် ပဲ့တတ်ပါသည် ။
(A) ကြွေသွားစပ် ဇာကိုး နီး ယား (Multi-layered Zirconia)(PFZ)
-ဇာကိုးနီးယား ကို အောက် ခံ Frame အနေ နဲ့ ထားပီး
ကြွေ တလွှာ ပီး တစ် လွှာ Coating လုပ်ထားသော‌ကြောင့် သဘာဝသွား ကြွေလွှာလေး အတိုင်းကြည်ပီး ဝင်းလက်တောက်‌ပြောင်‌နေသော ကြောင့် အရှေ့သွား တွင် သွားတုစွပ်ဖို့ လိုအပ်နေသူများအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် လှပမှု နှင့် မာကျောမှု ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကြွေအကောင်း စား ဖြစ်ပါသည်။
-‌ကြွေအကောင်းစားဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ကြာလာသည် နှင့် အမျှ အရောင် ပြောင်းလဲသွားခြင်း မရှိသလို အောက်ခံ သတ္တုမပါရှိခြင်း‌ကြောင့် သွားဖုံးအစပ် တွင် Dark Line လို့‌ခေါ်တဲ့ သတ္တုအရာထင် ပီးမဲခြင်းလည်း မဖြစ်ပေါ်စေ ပါ ။
(B)ဇာကိုးနီးယား သီးသန့် (Full Contour Zirconia) (FCZ)
ဇာကိုး နီးယာ တစ်တုံး လုံး ကို ခုတ်ပီး သွားတု ပြုလုပ်ထားတဲ့ အတွက် အခိုင်ခံ့ဆုံးနှင့် အကြမ်း အခံဆုံး ဖြစ်လို့ အနောက်သွားအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
(၁)စိတ်ကြိုက်စား ချင်ရာ စား နိုင်ပါသည်။
(၂) ပဲ့တာ ကွဲတာ မစိုး ရိမ်ရတော့ပါ ဘူး ။
(၃)ပုံ မှန်စိုက်နေကြ ကြွေသွားထက်လည်း ၅ဆ ခန့် မာ ကြောမှု ရှိပါသည်။
စိုက်ထားသည့် သွားတုရေရှည်ခိုင်ခံ့စေရန် အတွက် ဂရုစိုက်ရမည့်အချက်များ????????????
-စိုက်ထားသည့် သွားတုသည်သွားဖုံးနဲ့ ဟခြင်းကွာခြင်း မဖြစ်ရ။(margin လုံရပါမည်)
-Fitting ကောင်းရပါမယ်။ခုခြင်း ၊ထောက်ခြင်း မဖြစ်ရ ၊မိမိသွားကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာစားနိုင်ရပါမည်။
-သွားတုများပေါက်ပြဲနေပါက မပေါ့ဆသင့် ပဲအမြန်ဆုံးအသစ်လဲရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းတွင် တခါသုံးပစ္စည်းများနှင့် သွားကိရိယာများကို ပိုးမွှားကင်းစင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည့်အိတ်(Sterilisation Pouch)ထဲသို့ထည့်ပီး စနစ်တကျ ပိုးသတ် သန့်စင်ထားသောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာလာရောက်ကုသနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။????????????
➡️ကြိုတင် Appointment ယူလိုသည်ဖြစ်စေ
Chat Box သို့မဟုတ်
????09979005387 09 777 870 880ကို
Free Check up ::: Free Discussion
Address : အမှတ်(၅၀)၊ မြေညီထပ် ၊ အလယ်ဘလောက် ဌာနာလမ်း၊နတ်စင်လမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊099 7900 5387 09 777 870 880
(one way ဖြစ်သောကြောင့် အထက်ဌာနာလမ်း or နတ်စင်လမ်းမှ ပတ်ဝင်ပေးပါရန်)????????????
ဆေးခန်းဖွင့်ချိန်- ???? မနက်၁၀နာရီ- ည၈နာရီ????
(ပိတ်သည့်ရက်ကို Page တွင်ကြေညာပေးပါမည်)
D Royal Dental Clinic
If you want to know any our services you can free contact our Dental Aesthetics and Implant Center !
No.141/145, 1st Floor (B), United Tower ,Bo Aung Kyaw Road, Kyauktada Tsp, Yangon
© 2019 | D-Royal Dental Clinic | All Rights Reserved & Developed by Hap Eye | Myanmar Digital Marketing Agency..